အကောင်းဆုံးကိုကွန်ပျူတာလိင်ဂိမ်းအပေါ်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေအပြန်အလှန်ညစ်ညမ်းအသစ်တခုစုဆောင်းမှုရှိပါတယ်ကြောင့်သင်တစ်ဦးအဆုံးစွန်အော်ဂဇင်များအတွက်လိုအပ်စေခြင်းငှါအရာခပ်သိမ်းရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော၊လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့လှုပ်ရှားမှုရှိသောဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူပါလာသည့်မျိုးဆက်သစ်မှဂိမ်းများရှိသည်။ ထိုဂိမ်းယခင်ကထက်လမ်းပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံအဲဒီမှာထိုင်မည်မဟုတ်,သင်ဂိမ်းများကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲကစားသည့်အခါလုပ်ဖို့အသုံးပြုတူညွှန်ပြခြင်းနှင့်နှိပ်ခြင်း. ကစားနေစဉ်သင်ယူနိုင်သည့်လုပ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်မည့်လွတ်လပ်မှုသည်သင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုရိပ်မိသောလမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်။, ဤနည်းအားဖြင့်ဤဂိမ်းများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များထက်ပင်အမှန်တကယ်ခံစားရလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကြက်တိုက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သင်လိုချင်သည့်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်ရလိမ့်မည်ဟုမသာ,ဒါပေမယ့်ဒီဂိမ်းအချို့အတွက်ပုံပြင်များဒါကောင်းစွာသင်ကစားကြောင်းကြက်တိုက်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့စတင်လိမ့်မည်ဟုရေးထားလျက်ရှိ၏။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ယုတ်စိတ်အတွင်း၌လှိမ့်နေသောသူတို့အားရိုင်းစိတ်ကူးယဉ်အခြေအနေများအချို့ကိုကျေနပ်မှကြွလာသောအခါထိုအထူးသဖြင့်သာယာသောပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ဝင်ရောက်ခွင့်လုံးဝအခမဲ့နှင့် 18 သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ဧည့်သည်များမှပွင့်လင်းသည်။ ဂိမ်းအားလုံးကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်ပြေးရန်၊ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤဂိမ်းများကိုပူဇော်သောပေါ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားသူတို့ကိုပိုပြီးကစားဘို့ပြန်လာစေမည်တဲ့ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်အံ့သောငှါအပေါငျးတို့သအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာမယ့်ကြောင်းသေချာပါစေ။
တစ်ခုတည်းအကောင်းဆုံးဂိမ်းအဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာရှိပါသည်။ အဘယ်သူမျှမထိပ်တန်းစာရင်းများဖြစ်စေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းမှကြွလာသောအခါ,လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးရှိပါတယ်,ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သောကြောင့်. ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးစဥ္းစားရမယ့္ဂိမ္းေတြကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ေရာက္လာတာပါ။ အမျိုးသားရော၊အမျိုးသမီးရော၊အမျိုးသားရော၊အမျိုးသမီးရောအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားတယ်၊ဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ၊မဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ၊မဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ၊မဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ၊မဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ၊မဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ၊မဖြောင့်သည်ဖြစ်စေ။ ကျနော်တို့ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းပြီးနောက်ကြည့်ဖို့ရောက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်နည်းပညာနှင့်အနင်းအရည်အသွေးနှစ်ခုလုံးအတွက်၎င်းတို့အားလုံးကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဒါကကျနော်တို့လိင်ဂိမ်း၏ထိုကဲ့သို့သောလက်ဆွဲစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပုံပါပဲ။
ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအဓိကကျတဲ့အမျိုးအစား,ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသောဂိမ်းစတိုင်များကိုဖုံးအုပ်မျိုးစုံအမျိုးအစားကနေလာသောဂိမ်းများတွင်သူတို့ကိုဆောင်ခဲ့သာ။ အွန်လိုင်းမှာတွေ့နိုင်တဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဂန္တဝင်လိင်ဂိမ်းတွေ၊ဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်ကွက်တွေ၊ကြက်သီးမွေးညှင်းထစရာလိင်ဂိမ်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ဂန္တဝင်လိင်ဂိမ်းတွေ။ ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကမ္ဘာ၏အခြားဂိမ်းအမျိုးအစားလစျြလြူရှုခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ခေတ်ရေစီးကြောင်းလိင်ဂိမ်းကနေမှုတ်သွင်းသူရဲကောင်းများနှင့်အတူအသစ်နှင့်စိန်ခေါ်မှုကဒ်စစ်တိုက်ဂိမ်းမှဂန္လောင်းကစားရုံများနှင့်ပဟေဠိဂိမ်းကနေအရာအားလုံးရှိသည်။
ဒီနေရာမှာအားလုံးဂိမ်းများကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်မသာ,ဒါပေမယ့်သူတို့လည်းမက်ကရယ်နှင့်မည်သည့်အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ်အိုင်ကွန်ကိရိယာပေါ်တွင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ သို႔ေသာ္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကစားသမားမ်ားအားလံုးကိုကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးေပၚတြင္ဂိမ္းကစားရန္အၾကံေပးပါသည္။ အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်ခံစားနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးစွဲငြိဖွယ်ရာအတွေ့အကြုံကိုပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်သည်ဇာတ်လမ်းအတွင်း၌သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနှစ်မြှုပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အားလုံးဧည့်သည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကျနော်တို့အားလုံးဂိမ်းများနှင့်ယခုအချိန်အထိတစ်ဖိုရမ်များအတွက်မှတ်ချက်အပိုင်းများရှိသည်။, ကျနော်တို့နေဆဲသင်သည်လည်းအခမဲ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘရောက်ဇာချက်တင်အတွက်အမည်မဖော်များအတွက်လမ်းအကောင်အထည်ဖော်အပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီညစ်ညမ်းဆိုက်ကိုအမြတ်အစွန်းလုံးဝလုပ်မထားဘူး။ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ေၾကာ္ျငာေတြဟာကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စုေဆာင္းမႈကိုတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔အတြက္အျမတ္အစြန္းေတြရရွိဖို႔အတြက္ေနရာတစ္ခုစီကေနေနာက္ဆံုးေပၚဂိမ္းေတြနဲ႔အတူေၾကာ္ျငာေတြကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အကောင်းဆုံးကိုကွန်ပျူတာလိင်ဂိမ်းတွေနဲ့အမာခံအပြန်အလှန်ခံစားခြင်းအားဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးမျိုးနှင့်အတူတက်ထားပါ။